अग्रपंक्तिमा खटिने उच्च जोखिममा – Sajha Bisaunee
अग्रपंक्तिमा खटिने उच्च जोखिममा
कर्णालीमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी गरी एक सय १४ जनामा कोरोना
सुुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरस ‐कोभिड–१९) को जालो सबैतिर फैलिएको छ । पछिल्ला केही दिनयता संक्रमण समुदायस्तरमा व्यापक बन्दै गएको हो । स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीजस्ता संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटिएका जनशक्तिलाई संक्रमण पुष्टि हुने क्रम बढ्दो छ । ‘फ्रन्टलाइनर’मा कोरोना पुष्टि हुन थालेपछि संक्रमणको जोखिम झनै उच्च देखिन थालेको छ । बुधवारसम्म प्रदेशभर ५० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिइसकेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार अहिलेसम्म कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी गरी एक सय १४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । ५७ जना स्वास्थ्यकर्मी र ५७ जना नै सुरक्षाकर्मीमा कोरोना देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी सुुर्खेतमा २९ जना स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएको छ ।
संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीमा जुम्लामा नौ जना, दैलेखमा ६ जना, हुुम्ला, जाजरकोट, कालीकोट, रुकुुम–पश्चिममा एक÷एक जनामा कोरोना देखिएको छ । निर्देशनालयले दिएको जानकारी अनुसार डाक्टर १७ जना, पारामेडिक्स ३६, ल्याब टेक्निसियन एक जना, फार्मेसी दुुई जना र स्टार्फ नर्स एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि सेवा प्रवाहमा समेत समस्या हुन थालेको अस्पतालहरूले जनाएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी नै आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा जानुु परेपछि स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा चुनौति भएको हो । यसले गर्दा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य उपचारमा समस्या देखिएको छ । अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि कतिपय अस्पतालहरूले अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गर्ने गरेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि अस्पताललाई नै सिल गरेर सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ ।
सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा मात्रै ३० जनाभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले स्वास्थ्यकर्मीहरूमा संक्रमण देखिन थालेपछि सेवा प्रवाहमा समस्या हुुने गरेको बताए । उनी भन्छन्, ‘सीमित जनशक्तिले कोरोना संक्रमित र अन्य बिरामीसमेत हेर्नु परिराखेको छ । स्वास्थ्यकर्मी आफै संक्रमित हुँदा सेवा प्रवाहमा झनै चुनौति थपिएको छ । जनशक्ति अभाव भएकाले प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग गरेका छौं ।’
स्वास्थ्यकर्मी मात्र होइन संक्रमित हुनेमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेका सुरक्षाकर्मीको संख्या पनि ठूलै छ । प्रदेशभर कार्यरत नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी गरी ५७ जना सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । त्यसमध्ये ३२ जना संक्रमणमुक्त भएर काममा फर्किसकेका छन् । कर्णालीका सात जिल्लामा कार्यरत सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार सुर्खेतमा २२, दैलेखमा १५, जुम्लामा ११, कालीकोटमा एक, डोल्पामा दुई र रुकुुम–पश्चिम तथा जाजरकोटमा तीन÷तीन जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । सल्यान, हुुम्ला र मुगुमा कार्यरत सुुरक्षाकर्मीलाई भने संक्रमण देखिएको छैन ।
त्यस्तै, कोरोनाका संक्रमित सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, अदालत र कारागारमासमेत भेटिन थालेका छन् । सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयहरूमा यसअघि नै संक्रमण पुष्टि हुँदै आएकोमा पछिल्लो समय कर्णालीमा अदालत र कारागारमा समेत कोरोना संक्रमण पुगेको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म जुम्लामा तीन जना कैदीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । जिल्ला अदालत सुर्खेतमा पनि एक जना कर्मचारीमा कोरोना देखिएको छ । कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अदालतले बुधवारदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि अत्यावश्यकबाहेकका सेवा प्रवाह बन्द गरेको जनाएको छ । अदालतका श्रेस्तेदार यमप्रसाद बाँस्कोटाले सबै कर्मचारीको कन्ट्याक्ट टे«सिङको आधारमा कोरोना परीक्षण गरेपछि त्यसको रिजल्टको आधारमा पुुनः सेवा सुुरु गरिने बताए । उनले यो अवधिमा अदालतबाट म्याद थप, पक्राउ पूर्जी, अनुुमति, कोरोना सम्बन्धी रिट र बन्दी प्रत्यक्षीकरणका सेवा प्रवाह भने नरोकिने जानकारी दिए ।
कर्णालीका उच्च तथा जिल्ला अदालतहरूमा अभियुुक्तलाई उपस्थित गराउनु परे पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ । कारागार चलान गर्दा भने पीसीआर रिपोर्ट माग्ने गरिएको छैन । कारागार पठाउँदा संक्रमणको आशंकितको मात्रै कोरोना परीक्षण हुने गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसपी लोकनाथ तिम्सिनाले बताए । उनले सुर्खेतमा हालसम्म तीन जना थुुनुुवालाई कोरोना संक्रमण भएको जानकारी दिए ।
यस्तै, अस्पतालमा आउने सेवाग्राहीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि प्रदेश आयुुर्वेद औषधालयमा सिल गरिएको छ । संक्रमितसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा रहेका कर्मचारीहरूबाट थप संक्रमण नफैलियोस् भन्नका लागि सिल गर्नुपरेको औषधालय प्रमुख डा. शंकरप्रसाद रिजालले बताए । बुधवारदेखि सिल गरिएको औषधालयले अर्को सूचना जारी नहुने बेलासम्मका लागि सम्पूर्ण सेवा बन्द रहने जनाएको छ ।
प्रकाशित मितिः १८ भाद्र २०७७, बिहीबार ०६:००